Waa maxay faa'iidooyinka aan arki doono haddii aan iibsado Pinterest Likes?
Waxay ku dhiirigelisaa kuwa kale inay jeclaadaan ama Faallo ka bixiyaan qoraalladaada
Kordhinta qiimeyntaada Hashtagaha aad isticmaashay
Waxay kaa caawineysaa inaad ku riixdo "saameynta fayraska"
Kuwa kale ayay u badan tahay inay Jeceshahay, Fiiriyaan & Faallo ka bixiyaan qoraaladaada
Amarada waxaa si buuxda loo geeyaa saacadaha 24
Maxay tahay sababta aan ugu iibsado Pinterest Likes?
Likes waa suurta galnimada midda ugu muhiimsan ee qofka raacsan ama qofka raacayaa uu eegi doono markay eegayaan astaantaada. Aad ayey muhiim u tahay in Jeceshaadu inay isbarbar dhigto raaciyahaaga si loo ilaaliyo aaminaadda dhagaystayaashaada. Haddii aad xisaabta ku leedahay 20,000 Raacag ah iyo 20 Jeclaan oo keliya, waxay u horseedi doontaa dhagaystayaashaada inay su’aal ka keenaan sharcinimada iyo hawlgalka kuwa raacsan. Markaad iibsaneyso Likes, waad u kordhin kartaa Likes to Followers saamigaaga guud ee boggaaga. Tan waxaa loo muujiyay in ay kordhineyso howlgalka dabiiciga ah ee dhagaystayaashaada.
Goorma ayuu Pinterest jeclaan doonaa inaan la keeno?
Si loo hubiyo adeegga tayada ugu sarreeya iyo dhalashada, waxaan dib u eegeynaa iibka kasta. Sidaa darteed, waxay qaadan kartaa saacadaha 24 si aad u bilowdo. 99% wakhtiga amarkaagu wuxuu bilaabmi doonaa dhowr saacadood ama ka yar. Haddii aad hayso amar weyn waxay sii wadi doontaa maalin kasta ilaa adeegga si buuxda loo bixiyo.
Tani ma dhigtay xisaabteyda halis?
Adeegyadayadu waa 100% aamin ah oo la isticmaali karo. Si ka duwan adeeg bixiyayaal badan kama codsanno ama uma baahnno furahaaga sirta ah ee Lambarkaaga Bulshada. Sidaa daraadeed, kuma xakameyneyno koontadaada ama uma jeedinno wax kasta oo aysan ahayn inay qabato. Adeegyada aan bixinno waa kuwo la tijaabiyey waqtiyo aan tiro lahayn oo aan sii wadno cusbooneysiinta iyo isbeddelada codsiyada warbaahinta bulshada si loo hubiyo tayada ugu sarreysa iyo natiijooyinka ugu wanaagsan. TurboMedia.io waxay ku bixineysay adeeggeeda ugu tayo sarreeya uguna hal-abuurka adeegyada Suuqa Warbaahinta Suuq-geynta Bulshada.